Foomamka Diiwaangelinta iyo Lacag celinta - Carewell SEIU 503
Hoos waxaa ku taxan dhammaan foomamka loo baahan yahay si aad isu diiwaan geliso ama aad u cusboonaysiiso dheefahaaga Carewell. Foomamka waxaa lagu habeeyaa dheef ama qayb ahaan.
Dooro dheef ama qayb si aad u aragto foomamka
Wixii ah Qorshooyinka Loo ansixiyay
Muhiim – Xogtaada mar kasta ha ahaato mida saxda ah
Si aad xaq ugu yeelato dheefaha Carewell, Xafiiska Maamulka Dheefta waa inuu fayl ku hayo magacaaga, jinsigaaga, Lambarkaaga Soshiyaal Sekuyuritiga, taariikhda dhalashada iyo ciwaankaaga hadda. Waa inaad sidoo kale xaqiijiso in macluumaadkaaga gobalka uu hayo uu yahay kii ugu danbeeyay. Fiiro Gaar ah: Soo gudbinta macluumaadkan waxay awood u siinaysaa Xafiiska Maamulka Dheefaha inuu kaa diiwaangeliyo dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ee Carewell SEIU 503 haddii aad u qalanto.
Soo gudbi foomka kore si aad macluumaadkaaga ugu cusboonaysiiso Xafiiska Maamulka Gunnooyinka
Raac tilmaamaha hoose si aad u cusbooneysiiso macluumaadkaaga shakhsiyeed ee Gobolka iyadoo ku xiran nooca shaqaale ee aad tahay.
Shaqaalaha Daryeelka Guriga (HCW)
Cusbooneysii cinwaankaaga xafiiska goobta APD/AAA ee deegaanka. Iskuduwaha/karraaniga HCW ee deegaanka ayaa ah qofka ku haboon in lala xidhiidho.
Shaqaalaha Taageerada Shaqsiyeed ee ODDS
Buuxi Foomkan beddelida Macluumaadka (PDF) si aad u hubiyo in DHS ay ku hayso macluumaadkaaga hadda jira faylka.
Shaqaalaha Taageerada Shaqsiyeed ee OHA
Buuxi Foomkan Cusboonaysiinta Macluumaadka Bixiyaha (PDF) si aad u hubiyo in OHA ay ku hayso macluumaadkaaga hadda jira faylka. Ku buuxi dhammaan qaybaha foomka marka laga reebo kuwan:
“Complete this section for an organization, group or agency (U buuxi qaybtan urur, koox ama wakaalad)”
“Taxonomy code changes (Koodhka Taxonomy wuu isbedelaa)”
Foomamkeena dijitaalka ah waxaa inta badan lagu helaa luuqadaha Isbaanish, Ruush, Fiyatnaamiis iyo Simplified Chinese. Si aad foomka ugu buuxisid luuqadda aad doorbideyso, guji calanka Maraykanka ee jira dhinaca midifg ee kore ee foomka, ka dibna dooro luuqadda aad doorbideyso.
Foomka Ka dhaafitaanka Dheefaha
Foom Dijitool ah
Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta
Waa in la raaciyaa marka la gudbiyo warqad sharaxaysa sababta aad u codsanayso racfaan.
Foomka Diiwaangelinta ee Lacag-Celinta Lacagaha Jaabka Laga Bixiyo ee Ceymiska Ilkaha ee Ku-Meel-Gaadhka ah
Foomka Sheegashada Lacag Celinta Aragga Ameritas (kaliya LASIK)
Foom PDF ah
Foomka Sheegashada Lacag Celinta Maqalka ee Ameritas
Foomka Lacag-celinta Xubinta VSP
Ku dalbo magdhawyada elektaroonig ahaan adiga oo ka dalbanaya bogga VSP ee barta vsp.com. Waa inaad akoon ka samaysato marka hore.
Wixii ah Qorshayaasha La ansixiyay
2022 Warqadaha Sannadlaha ah
Foomamkani waxay kooxda Dheefaha Carewell SEIU 503 ogolaanshaha u siinayaan inay kaa caawiyaan diiwaangelinta iyo ilaalinta caymiskaaga daryeelka caafimaadka. Warqadani ma aha codsi caymis caafimaad.
Oggolaanshaha 2022 HIPAA
Bayaanka Fahamka ee 2022
Foomka Oggolaanshaha Kaalmada Bulshada ee RISE Partnership ee 2022
Foomka Oggolaanshaha Kaalmada Bulshada ee OHA ee 2022
Oggolaanshaha Siideynta Foomka Macluumaadka
Buuxi tan haddii aad u baahan tahay inaad u ogolaato xubin qoyskaaga ka tirsan ama saaxiib aad aaminsan tahay inuu su’aalo kuu weeydiiyo, balamo qabto ama xaqiijiyo macluumaad adiga oo ku matalayo.
Wakiilka VIP ah ee Foomka Diiwaanka
2021 Warqadaha Sannadlaha ah
Foomamkani waxay siinayaan kooxda Dheefaha Carewell SEIU 503 ogolaanshaha inay kaa caawiyaan diiwaangelinta iyo ilaalinta caymiskaaga daryeelka caafimaadka. Warqadani ma aha codsi caymis caafimaad.
Foomka Macluumaadka Diiwaangelinta
Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi ah jeeg maran.
Foomka Sheegashada Lacag-celinta Caafimaadka
Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi Dukumiintiga Sharaxaada Dheefahaaga ama biilkaaga.
Foomka Lacag-celinta ee Ameriflex
Foomka Kharashka Dib-u-habaynta Lacag-celinta Sare
Waa in la raaciyaa marka la gudbinayo dukumentiyada canshuurta.
Wixii ah Medicare
Warqadaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Medicare
Foom Dijitaal ah
Buuxi tan haddii aad u baahan tahay inaad u ogolaato xubin qoyskaaga ka tirsan ama saaxiib aad aaminsan tahay inuu su’aalo kuu weeydiiyo, balamo qabto ama xaqiijiyo macluumaad adiga oo uu ku matalayo.
Foomka Sheegashada Lacag-celinta Medicare
Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi ah biilkaaga sare.
Xirmada Codsiga Dheefta PTO
Warqadda Shaqaalaha Lagama Maarmaanka ah